Warbixin nukliyeerka suuqa madow - BBC Somali
Warbixin nukliyeerka suuqa madow
Image caption Saambal radioactive.
Boliiska iyo mas'uuliyiinta garsoorka ee Moldova waxay macluumaad la wadaageen wakaaladda wararka AP, si ay u muujiyaan halista ay leedahay suuqa madow ee nukliyeerka, ayay sheegtay wakaaladdu.
Waxay sheegeen in xiriirka sii xumaanaya ee Ruushka iyo reer galbeedka ay sii adkeysay in la ogaado in kuwa kontarabaanka ka shaqeeya ay ku guulaysanayaan inay walxaha shucaaca radioactive oo ka yimaad Ruushka ay ka iibiyaan dibadda.
Lacago aad u badan ayaa la weydiistaa si loo helo walxaha nukliyeerka ah. " Waxaan filaynaa in kiisas kale oo badan ay soo baxaan" ayuu sheegay sarkaal ka tirsan boliiska Moldova oo la yiraa Constantin Malic.
"Inta ay kuwa kontarabaanka ka shaqeeya la tahay inay lacag badan ka sameyn karaan iyagoo aan la qaban, way sii wadayaan hawshaas", ayuu yiri sarkaalku.
kiisas badan oo ay aragtay wakaaladda wararka AP, boliiska ayaa burburiyay heshiisyo badan inta aan la dhammaystirin, laakiin kuwii madaxda ka ahaa hawlahaas way baxsadeen iyadoo ay dhici karto inay wataan nukliyeerkoodii kontarabaanka ahaa. Arrinta ku saabsan Caesium qofkii kontarabaanka ku soo gelin lahaa waxaa uu weydiistay lacag dhan 2.5 milyan oo EURO, una dhiganta 1.8 milyan oo dollar si looga iibsado walxo shucaaca radioactive ah oo ku filan inay sumeeyaan waddooyin magaalooyin badan.
Caweys ku yaal caasimadda Moldova ee Chisinau, waxaa uu ninkaasi u sheegay qof iska dhigayay inuu wax ka iibsanayo oo ahaa mid boliiska warka u geeya, in la sameyn karo dirty bomb oo aad ugu habboon kooxda isku magacawday dowladda islaamiga ah. " haddii aad iyaga xiriir la leedahay hawshu si hamsami ah ayay ku soconaysaa" ayuu yiri.
Saambal noociisu yahay radioactive oo aan aad khatar u ahayn ee Caesium 135, ayaa la soo saaray waxaana qabtay boliiska oo xiray ninkii watay iyo laba kale.
Saddex heshiis oo kale ayaa la fashiliyay sannadihii 2010, 2011 iyo 2014kii.